ဗဟုသုတ | Burmese Hearts | Page 3
Cover Letter ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့
အလုပ်တစ်ခုလျှောက်ပြီဆိုရင် Cover Letter ကောင်းကောင်းတစ်ခု ရေးထားနိုင်တဲ့အခါ အလုပ်ခန့်မယ့်သူရဲ့ စိတ်အာရုံဟာ ကိုယ့်အလုပ်လျှောက်လွှာကို ပိုဦးစားပေး စဉ်းစားလာကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ Cover Letter မှာ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို highlight ပြနိုင်ရပါမယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်လျှောက်တဲ့ ရာထူးနေရာကို ကိုယ်ဘယ်လောက် ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ခဲ့သလဲ၊ လုပ်နိုင်သလဲဆိုတာကို တိုတိုတုတ်တုတ်၊ ရှင်းလင်းရေသားဖော်ပြထားခဲ့ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အရှည်ကြီးဖတ်နေစရာမလိုတော့ပဲ ဒီရာထူးဟာ ကိုယ်နဲ့သာအကိုက်ညီဆုံးလို့ ခန့်မယ့်သူက သတိထားမိအောင် ရေးထားဖို့ ဆိုလိုတာပါ။
ကိုယ်ရေးတင်မယ့် Cover Letter ဟာ အထူးသဖြင့် တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားရပါမယ်။
ဒီ Cover Letter ထဲ ဘာတွေပါရမလဲဆိုတော့
ကိုယ်ဘယ်နေရာ၊ ရာထူးလျှောက်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြထားရပါမယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီနေရာဟာ ကိုယ့်အတွက်ဘာကြောင့် အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကို အကြောင်းအရာသုံးမျိုးနဲ့ ဖော်ပြထားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။
ဒီလိုနေရာ၊ ရာထူးကို ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လောက်ကာလ အချိန်အတိုင်းအတာအထိ လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ဖော်ပြထားရပါမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အလုပ်သုံးခု၊ အများဆုံးလေးခုလောက်သာ ဖော်ပြထားရမှာပါ။
သင့်ကို ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အီးမေးလ် လိပ်စာတွေကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားရပါမယ်။
အထူးသဖြင့်ကတော့ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး ရေးသားခြင်းတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းနဲ့ professional ကျကျ ဖော်ပြပေးထားရမှာပါ။
Cover Letter ရေးသားနည်းကို ဒီက ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန် ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted in ဗဟုသုတ on September 26, 2011 by BurmeseHearts.	ဝက်သားတုတ်ထိုးပြုလုပ်နည်း
Share ဝက်သားတုတ်ထိုးပြုလုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက(ကိုယ်စားချင်တဲ့ ကလီစာပေါင်းစုံ ၁ကီလိုခွဲခန့်)၊ ဆီထမင်းစားဇွန်း၂ဇွန်း၊ ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်းတဝက်၊ ငံပြာရည် လ္ဘက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း၊ ဆား လ္ဘက်ရည်ဇွန်း တဝက်၊ ကြက်သားမှုန့် လ္ဘက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း၊ နာနတ်ပွင့်အရွယ်တော် လေးပွင့်၊ ဂျင်း လက်တစ်ဆစ်ခွဲခန့်၊ နနွင်းမှုန့် မကျည်းစေ့တဝက်ခန့် စတဲ့ပစ္စည်းများလိုအပ်ပါတယ်။
အူမကြီးဝယ်လာပြီး မကိုင်ရသေးရင် အူမကြီးကိုခွဲပြီး ဓါးနဲ့ခြစ်ချပါ။ အိုးပေါ်မီးမပြင်းတပြင်းလောက်နဲ့ အူမကြီးအတွင်းနံရံက အကျိအချွဲတွေ ကုန်စင်သည်အထိ အိုးမှာဖိလှိမ့်ပေးပါ။ အကျိအချွဲတွေ ကုန်လောက်ပြီထင်ရင် အိုးပေါ်ကချပြီး အူမကြီးအတွင်းနံရံမှာ ကပ်နေတဲ့ အကျိအချွဲတွေကို ခြစ်ချပါ။ အနံ့ပျောက်အောင်နဲ့ ပိုစင်အောင် မန်ကျည်းသီးကို ရေဖျော်ပြီး အတွင်းနံရံတွေကို မကျည်းနှစ်ဖတ်တွေနဲ့ တိုက်ပစ်ပါ။ ပြီးရင် အတွင်းနံရံက အကျိအချွဲတွေကို ဓါးနဲ့ ပြန်ခြစ်ချပြီး ရေစင်အောင်ဆေးပါ။
ရေဆေးပြီးသော ကလီစာတွေထဲကမှ နားရွက်ဆိုရင် နားရွက်ပြားကို နယ်မယ့် အရသာတွေဝင်အောင် မျက်နှာပြင်ကို အဆင်ပြေသလို (ငါးကိုယ်ထည်တွေထဲ အရသာဝင်အောင် စဉ်းသလိုမျိုး)ဓါးနဲ့စဉ်းချထားပါ။
နှလုံးဆိုရင် ဓါးချွန်နဲ့ အတွင်းထဲအရသာဝင်အောင် အပေါက်ကလေးတွေအဖြစ် ဓါးနဲ့အဆင်ပြေသလို နေရာအနှံ့ထိုးပေးပါ။ လျှာ၊ သရက်ရွက်၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်း စသဖြင့်တို့ကိုလည်း အဲဒီလို ထိုးပေးပါ။(ထိုအခါ အနံ့၊ အရသာက အတွင်းသားအထိ)ဝင်သွားပါတယ်။
ချက်ပြုတ်မယ့် ကလီဆာတွေထဲ အဆင်သင့်ထားတဲ့ တန်ဆာပလာတွေ(ပျားရည်၊ ငံပြာရည်၊ ဆား၊ အသားမှုန့်၊ နနွင်းမှုန့်တို့ကို)ထည့်လိုက်ပါ။ ဂျင်းကို အခွံခွာပြီး အပြားလိုက် ပါးပါးလှီးပါ။(ဂျင်းကို ထောင်းလိုက်ကျိတ်လိုက်တဲ့အခါ အနံ့ပိုမွှေးပေမယ့် ဂျင်းရဲ့ခါးသက်သက်အရသာဟာ ကလီစာတွေကို သွားသက်ရောက်တဲ့အတွက် အရသာထင်သလောက် မကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။) ပြီးရင် နယ်ထားတဲ့ ကလီစာတွေထဲကို ထည့်နယ်ထားပါ။
ဒီလိုနယ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ဆီကိုအိုးထဲထည့်ပြီး နယ်ထားတဲ့ ကလီစာတွေပါ ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် လ္ဘက်ရည်ပန်းကန်တစ်လုံးစာ(ကလီစာတွေရေမြုပ်ရုံ)ရေထည့်၊ အဖုံးအုပ်ပြီး မီးမလျော့မပြင်းနဲ့ မီးဖိုပေါ်တင်ထားပါ။(မီးပြင်းပြီး မွှေဖို့မေ့သွားတတ်တဲ့အခါ ကလီစာတွေ ကပ်ပြီးတူးသွားတတ်တာမို့ အနံ့အရသာပြောင်းပြီး ပျက်သွားတတ်တာမို့ မီးမပြင်းဖို့ အထူးသတိထားပါ။) ပြီးရင်အိုးကို ၅မိနစ်တစ်ခါလောက်ဖွင့်မွှေပေးပါ။
ရေမခမ်းတခမ်းအနေအထားမှာ အိုးကပ်မသွားခင် နောက်ထပ် ရေလ္ဘက်ရည်ပန်းကန်တစ်လုံးစာ(ကလီစာတွေရေမြုပ်ရုံ) ထပ်ထည့်ပြီး အဖုံးပြန်အုပ်ထားပါ။ မီးမလျော့မပြင်းနဲ့ နောက်ထပ် ၁၀မိနစ်လောက်ထားပါ။ နှလုံးလိုတို့ ကျောက်ကပ်တို့ပါရင် နူးလား၊ မနူးလား ဓါးနဲ့ ထိုးကြည့်ပါ။ သိပ်အားမစိုက်ရဘဲ အိကနဲဓါးဝင်သွားတဲ့အခါ နူးနေပါပြီ။ အဲဒီလို နူးနေပြီဖြစ်တဲ့ နှလုံးတို့၊ ကျောက်ကပ်တို့ကို ဇွန်းနဲ့ခပ် ထပ်ခြမ်းခွဲပြီး ပြန်ထည့်ပါ။ (ဒါဟာ အတွင်းသားအထိ အနံ့အရသာရောက်သွားစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။) ဒီလိုပြန်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ နာနတ်ပွင့်တွေကို အိုးထဲ ထည့်မွှေပြီး အဖုံးပြန်အုပ်ထားပါ။(နာနတ်ပွင့်ကို ကလီစာတွေ အကုန်နူးပြီးမှ ထည့်ဖို့ မမေ့ပါနှင့်။ ကလီစာမနူးမီ နာနတ်ပွင့်ထည့်ထားပါက နာနတ်ပွင့်တွေ အရည်ပျော်ပြီး ကလီစာတွေ မည်းကုန်တဲ့အပြင် အရသာလဲ ခါးသက်သက်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။) မီးကို မပြင်းစေပဲ ငါးမိနစ်တစ်ခါ အိုးကို မွှေပေးပါ။
(ပုံမှန်အားဖြင့် မီးမလျှော့မပြင်းဆိုလျှင် ရေတတစ်ခါထည့်ဖို့ မိနစ်နှစ်ဆယ်နီးပါးရှိပါတယ်။ မိနစ်နှစ်ဆယ်မတိုင်မီ ရေခမ်းပါက မီးများလို့ဖြစ်ပြီး မိနစ်နှစ်ဆယ်နှင့် ရေမခမ်းပါကလဲ မီးနည်း၍ဖြစ်သည်။ မီးများလျှင် အိုးကပ်တတ်ပြီး၊ အိုးမကပ်ရင်တောင် နူးဖို့ ရေမကြာခဏထည့်ပေးရပါတယ်။ မီးနည်းလျှင်နူးအောင် ကြာကြာစောင့်ရပါတယ်။)
ရေမခမ်းတခမ်းအနေအထားမှာ အိုးကို မီးပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ့အခါအဆင်သင့် စားသုံးလို့ရပြီဖြစ်တဲ့ အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံသော ဝက်သားတုတ်ထိုးကို တွေ့ရမှာပါ။ (ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနေတုံးပြီး ကိုယ့်ဘာသာ တုတ်ထိုးတော့နော်။)
This entry was posted in ဗဟုသုတ on September 10, 2011 by BurmeseHearts.	Desktop ထဲက ပစ္စည်းများ
မြင်နေရတာက Desktop တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ Processor အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Processor က Heat(အပူ) ကို အေးအောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ (Fan) ပန်ကာနဲ့အုပ်ထားပြီး အအေးခံပေးထားရပါတယ်။
Processor ဆိုတာ ကွန်ပျူတာရဲ့ ဦးနှောက်လို့ဆိုရင် ရပါတယ်။ Mouse က ကလစ်နှိပ်ပြီး ခိုင်းလိုက်တိုင်း၊ Keyboard က ရိုက်ထည့်လိုက်တိုင်း ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကကွန်ပျူတာကို Function တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ခိုင်းလိုက်တိုင်း Processor က အဲဒီ Function ကို အလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
RAM (ရမ်) ဟာဆိုရင် ကွန်ပျူတာထဲမှာ Data(အချက်အလက်)တွေကို ခဏတာ သိမ်းပေးထားတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို Shut down လုပ်လိုက်ရင်၊ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကွန်ပျူတာပိတ်သွားရင် အဲဒီထဲမှာ ခဏတာ သိမ်းပေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ ပျောက်ဆုံးသွားတတ်ပါတယ်။ အလွယ်အားဖြင့်ပြောရင် Copy, Cut နဲ့ Paste လုပ်မယ့် အချက်အလက်တွေဟာ ဒီ RAM ထဲမှာ ခေတ္တသိမ်းဆည်းပေးထားတဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာက အဲဒီအချက်အလက်တွေကို ကိုယ်ခိုင်းလိုက်တိုင်း မှတ်မိနေပြီး အလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကွန်ပျူတာပိတ်သွားတဲ့အခါ အဲဒီ ကိုယ်ခိုင်းထားခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေကို စက်ပြန်ဖွင့်ပြီးခေါ်လဲ ကွန်ပျူတာက မမှတ်မိတတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ RAM ထဲမှာ ခေတ္တခဏ သိမ်းဆည်းပေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ RAM ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ဖိုင်တွေဟာ ယာယီသိမ်းဆည်းပေးထားတာသာဖြစ်ပြီး စက်ပိတ်တာနဲ့ ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။
Save လုပ်ပြီး သိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်တွေ၊ အချက်အလက်တွေဟာ ဒီ Hard Drive မှာ လာသိမ်းထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဆီမှာ Save လုပ်ပြီးသိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်တွေ အချက်အလက်တွေဟာ (Virus ကြီးကြီးမားမား ဖျက်ဆီးသွားတာမှလွဲရင်) တော်ရုံ မပျက်စီး၊ မပျောက်ပျက်တတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ RAM နဲ့ Hard Drive ရဲ့ ကွာခြားချက်ပါ။ Data တွေ သိမ်းတဲ့ Speed မှာ Hard Drive က RAM ထက် အဆပေါင်း ရာချီမြန်ပါတယ်။ နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ Software တွေ၊ File တွေ၊ Data တွေကို Hard Drive မှာ လာသိမ်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Motherboard မှာတော့ chips တွေ၊ circuits တွေ၊ wire တွေနဲ့ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာ တွေ့ရပါမယ်။ Motherboard က ကိုယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ Single Function တွေ အကုန်လုံးကို Separate Components တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပေးသွားတာပါ။ RAM နဲ့ Processor တွေဟာ Motherboard မှာ တိုက်ရိုက် Plug in လုပ်ပြီး သုံးရတာပါ။
Video Card ကို Motherboard ရဲ့ Video Card Slot မှာ ထည့်ပြီးတဲ့အခါ Desktop အနောက်ဖက်မှာ Video Card ရဲ့ အပြာရောင် Port ကို မြင်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Audio Card / Sound Card
Audio Card မှာဆိုရင် Input နဲ့ Output နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အများသိရှိ အသုံးပြုနေတာကတော့ ပန်းရောင်ပလပ်ပေါက်နဲ့ အစိမ်းရောင် ပလပ်ပေါက် နှစ်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းရောင်က Microphone အတွက် ဖြစ်ပြီး အစိမ်းရောင်ကတော့ Headphone အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
Desktop ရဲ့ Power Supply က သုံးပေါက်ထိုး Pin ပုံစံ ရှိပါတယ်။
သူ့ရဲ့ Function ကတော့ မီးပလပ်ထိုးလိုက်တာနဲ့ ဆားကက်ကိုလာတဲ့ Voltage က ကွန်ပျူတာနဲ့ Processor အအေးခံထားတဲ့ ပန်ကာကို သွားအလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ Desktop တွေမှာ Power Supply လုပ်ပြီး ပလပ်ပေါက်ထိုးထားမှ ကွန်ပျူတာတွေက အလုပ်လုပ်တာပါ။
CD / DVD Player ဟာ CD / DVD တို့ ကြည့်ရုံအပြင် DVD ကို Burn ပြီး Create လုပ်လို့လဲရပါတယ်။ DVD ကို Burn ဖို့ဆိုရင် DVD Disc နဲ့ DVD Player ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ DVD ပေါ်မှာ RW လို့ ဖော်ပြထားရင် (Rewritable) လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါဆို DVD ကို Burn ပြီး Create လုပ်လို့ ရပါတယ်။
USB ဆားကက်တွေကတော့ Camera ၊ Mouse ၊ Keyboard အစရှိသည်တို့ကို Plug in လုပ်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။
ဓါတ်ပုံများကို Google Image ကနေ အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
This entry was posted in ဗဟုသုတ on September 2, 2011 by BurmeseHearts.	Post navigation
Recent Posts	ကလေး(၇)ယောက်ရှေ့တွင် ဇနီးကိုဓါးနှင့်ထိုးသတ်ခဲ့သော ခင်ပွန်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဟိန္ဒူဘုရားပွဲ လူပိမိ၍ (၁၀)ဦးသေပြီး (၃၀)ဒဏ်ရာရ
သီရိလင်္ကာသမ္မတ၏ညီ ပေါက်ဆိန်ဖြင့် ခုတ်သတ်ခံရ
IS ဆန့်ကျင်ရေးဝါဒဖြန့် စာရွက် ၆၀,၀၀၀ ကို အမေရိကန်က ဆီးရီးယားတွင် ကြဲချ
ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်းမီးလောင်မှုတွင် သေဆုံးခဲ့သော စင်္ကာပူနိုင်ငံသားအမှု စိစစ်နေ
သင်္ကြန်တွင်းလက်မှတ်မှောင်ခိုဈေးရောင်းသည့် အဝေးပြေးကားလိုင်းများ ယာဉ်စီးရေတိုးလျှင် အရေးယူမည်
ငပလီနှင့် မြောက်ဦးတို့တွင် မိုးပျံပူဖောင်းခရီးစဉ်များ ပျံသန်းရန် အစီအစဉ်ရှိ
နယူးယောက်မြို့လယ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၍ အဆောက်အအုံ နှစ်ခု ပျက်စီးပြိုကျ
ယောက်ျားလေးအယောက် (၃၀)ကို အွန်လိုင်းကသိမ်းသွင်းပြီး လိင်အသုံးပြုသူအမျိုးသား
အတွင်ဝန်ရုံးအတွင်းကျင်းပခဲ့သည့် မွေးနေ့ပါတီ YHT မသိ
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်မည်
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် အာဘေးအား ဆန့်ကျင်သည့် လူပေါင်း ၁၄၀၀၀ ကျော် လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြ
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း လီကွမ်ယူ ကွယ်လွန်
အီရတ်ရှိ ရာဇီဒီများကို IS ဝင်စီးစဉ်က အဖြစ်အပျက်များ
ကိုရမ်မီးရှို့ခဲ့လို့ သေသည်အထိ ဝိုင်းရိုက်ကြ၍ မီးရှို့ကာ မြစ်ထဲပစ်ချခြင်းခံရတဲ့ အာဖဂန်အမျိုးသမီး
ကားဂိတ်တွင် စောင့်နေသော (၁၈)နှစ်သမီးအား ကားဂိတ်နောက်ချုံကွယ်ထဲ အဓမ္မဆွဲခေါ်သွင်းပြီး မုဒိမ်းကျင့်သတ်ခဲ့သူ
နှစ်နှစ်သမီးအား အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော အမျိုးသား ထောင်(၁၅)နှစ်ကျ
ရှစ်ရက်ကြာ လောင်ကျွမ်းနေပြီဖြစ်သော ပုပ္ပါးတောင်မကြီးမှ တောမီး မငြိမ်းသတ်နိုင်သေး
တူနီးရှားအမျိုးသားပြတိုက် တိုက်ခိုက်မှု ၎င်းတို့၏လက်ချက်ဟု IS ပြော
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး နေရာင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ် မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ဆိုက်ရောက်
လိမ်ညာပြီး မမှန်မကန်ပြောဆိုမှုတွေကို ပြည်သူမကြိုက်တဲ့အတွက် မလိမ်ကြရန် ဦးရွှေမန်းပြော
ပြည်၌ တောင်ပြိုသောမြေကြီးများ ထိမှန်၍ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံး
POPULAR	ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်းမီးလောင်မှုတွင် သေဆုံးခဲ့သော စင်္ကာပူနိုင်ငံသားအမှု စိစစ်နေ	ကလေး(၇)ယောက်ရှေ့တွင် ဇနီးကိုဓါးနှင့်ထိုးသတ်ခဲ့သော ခင်ပွန်း	IS ဆန့်ကျင်ရေးဝါဒဖြန့် စာရွက် ၆၀,၀၀၀ ကို အမေရိကန်က ဆီးရီးယားတွင် ကြဲချ	ယောက်ျားလေးအယောက် (၃၀)ကို အွန်လိုင်းကသိမ်းသွင်းပြီး လိင်အသုံးပြုသူအမျိုးသား	နယူးယောက်မြို့လယ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၍ အဆောက်အအုံ နှစ်ခု ပျက်စီးပြိုကျ	ပဋိသန္ဓေတည်ခြင်း လက္ခဏာများ	ကိုရမ်မီးရှို့ခဲ့လို့ သေသည်အထိ ဝိုင်းရိုက်ကြ၍ မီးရှို့ကာ မြစ်ထဲပစ်ချခြင်းခံရတဲ့ အာဖဂန်အမျိုးသမီး	အီရတ်ရှိ ရာဇီဒီများကို IS ဝင်စီးစဉ်က အဖြစ်အပျက်များ	အီးမေးလ်ကနေတဆင့် တင်သည့် အကြောင်းအရာအသစ်များ ရရှိလိုပါက Subscribe လုပ်နိုင်ပါပြီ။ Archives	Select Month
March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 MOST POPULAR	ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်းမီးလောင်မှုတွင် သေဆုံးခဲ့သော စင်္ကာပူနိုင်ငံသားအမှု စိစစ်နေ	ကလေး(၇)ယောက်ရှေ့တွင် ဇနီးကိုဓါးနှင့်ထိုးသတ်ခဲ့သော ခင်ပွန်း	IS ဆန့်ကျင်ရေးဝါဒဖြန့် စာရွက် ၆၀,၀၀၀ ကို အမေရိကန်က ဆီးရီးယားတွင် ကြဲချ	ယောက်ျားလေးအယောက် (၃၀)ကို အွန်လိုင်းကသိမ်းသွင်းပြီး လိင်အသုံးပြုသူအမျိုးသား	နယူးယောက်မြို့လယ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၍ အဆောက်အအုံ နှစ်ခု ပျက်စီးပြိုကျ	ပဋိသန္ဓေတည်ခြင်း လက္ခဏာများ	ကိုရမ်မီးရှို့ခဲ့လို့ သေသည်အထိ ဝိုင်းရိုက်ကြ၍ မီးရှို့ကာ မြစ်ထဲပစ်ချခြင်းခံရတဲ့ အာဖဂန်အမျိုးသမီး	အီရတ်ရှိ ရာဇီဒီများကို IS ဝင်စီးစဉ်က အဖြစ်အပျက်များ	RECENT NEWS	ကလေး(၇)ယောက်ရှေ့တွင် ဇနီးကိုဓါးနှင့်ထိုးသတ်ခဲ့သော ခင်ပွန်း